Soomaaliya waa dalka 5-aad khatarta dumarku ugu badan tahay - BBC News Somali
Soomaaliya waa dalka 5-aad khatarta dumarku ugu badan tahay
15 Juunyo 2011
Soomaaliya, ayaa lagu tilmaamay wadanka shanaad ee ugu qatarta badan adduunka dhinaca haweenka.
Warbixin ay soo saartay hay'adda Trustlaw oo ka tirsan Thomson Reuters Foundation, ayaa ku tilmaantay in dhinaca rabshadaha daryeel xumada iyo saboolnimada daran ay ka dhigtay dalka Afghanistan kan ugu qatarta badan, iyadoo ay Congo noqotay dalka Labaad, Pakistan iyo India ayaana ku soo xiga.
Soomaaliya, ayaa dalka Shanaad ka noqotay daraasad caalami ah oo lagu sameeyay fahamka laga qabo halista laga soo bilaabo xadgudubyada gudaha qoyska, dhaqaalo xumada, gudniinka iyo weerarada aashitada.
Dalka Pakistan ayaa waxaa uga sii daray qatarta dumarka khilaafka ka sii soconaya, weerarada dhinaca cirka ee NATO iyo dhaqanka sidaas waxaa tiri Antonella notari oo madax ka ah Dumarka isbadalka sameeya oo ah koox taageerta ganacsatada yar yar ee dunida oo dhan.
Waxay inttaas ku dartay in dumarka isku daya in qabtaan door bulsho ama ay qabtaan shaqooyinka sida in ay booliis noqdaan, ama war aqriye, inta badan in loo hanjabo ama la dilo.
Hay'adda Truslaw ayaa ilaa 213 khabiir oo ka kala socda shanta qaaradood ka dalbatay in ay u kala hormariyaan dalalka adduunka sida ay u arkaan qatarka ay ka fahamsan yihiin iyo sidoo kale lix qodob oo kale oo la xiriira qatarta.
Waxaa ay qodobadan ahaayeen haliska dhinaca caafimaada, xadgudubka galmada, xadgudubyada kale, dhibaatooyinka la xiriira dhaqanka iyo diinta, helid la'aan khayraadka iyo kala gudbinta dadka.
Khabiirada qaar ayaa xusay in codbixinta ay muujisay in khatarta qaarkeed sida xaqiraadda dumarka in aysan war wayn noqon dunida hadana ay dumarka ula mid tahay bombooyinka, rasaasta iyo dhagxaanta iyo kufsiga ka jira goobaha dagaalka.
Image caption Wasiirka Haweenka iyo horumarinta qoyska
Sababaha Soomaaliya looga dhigay dalka shanaad ee ugu qatarta badan ayaa lagu tilmaamay in ay ka mid yihiin dhimashada hooyada aad u saraysa, kufsiga iyo gudniinka, iyadoo ay soo raacaan helidda waxbarashada dumarka, daryeelka caafimaadka iyo ilaha dhaqaalaha oo aad u yar.
Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, ayaa u sheegtay hay'adda TrusLaw in ay aad uga yaabtay warbixinta sababtoo ah in ay u haysatay Soomaaliya in ay liiska ugu sare mari doonto. Haweenayda Soomaaliya ku sugan ayay xustay in waxa ugu qatarta badan ay yihiin marka ay uur yeelato in nolosheedu ay boqolkiiba konton ay halis galayso waayo ma jiro daryeelka caafimaad ee dhalmada, isbitaallo aysan jirin iyo xarumo daryeel oo waxtar wayn u leh hooyada.
Waxaa kaloo ay ka hadashay kufsi mar walba dhaca, gudniinka oo Soomaaliya oo dhan caado ka ah iyo waliba gaajada iyo abaaraha, oo ay u sii wehliyaan dagaalada oo qofka dumarka ah uu dhiman karo daqiiqad kasta iyo maalin kasta.
Khabiiarada ra'yiga laga uruuriyay waxaa ku jira shaqaalaha gargaarka, aqoonyahanno, shaqaalaha caafimaadka, siyaasad dejiyayaal, weriyayaal iyo khubarro dhinaca horumarita ah.